Ahoana ny fomba fampidinana ireo rindrambaiko WiFi ihany ao amin'ny Huawei AppGallery | Androidsis
Ahoana ny fomba fampidinana fampiharana WiFi-irery amin'ny Huawei AppGallery
Huawei dia miloka mafy amin'ny fananana fivarotana fampiharana azy manokana ary mifaninana mivantana amin'ny mpitarika, ny Google Play Store. Herinandro vitsivitsy lasa izay, nanavao ny endriny ny AppG Gallery tamin'ny fanatsarana ny sary an-tsaina ny atiny, miloka amin'ny fahitana rindranasa vaovao ary koa manasongadina ny alaina indrindra amin'izao fotoana izao.
Ny tompona fitaovana Huawei dia afaka manintona fitaovana avy amin'ny magazay miaraka amin'ny fifandraisana Wi-Fi sy data, na dia ilay voatondro ho voalohany aza no voalohany. Tsy misy dikany ny fananana fifandraisana data tsy manam-petra, saingy miova izany rehetra izany raha 2-3 GB isam-bolana ny salan'isa azonao.
Para hahafahanao mampidina rindranasa amin'ny WiFi fotsiny amin'ny Huawei AppGallery dia mila manamboatra azy ianao ka izany dia miaraka hatrany amin'ny fampifandraisana ny trano, ny asa na ny teboka mahazatra hafa. Ny mpampiasa dia afaka misafidy izany ao anatin'ny safidin'ny magazay malaza ary mametra ny fampiasana angona finday.
Ahoana ny fomba fampidinana apps amin'ny WiFi fotsiny amin'ny AppGalog
Ny AppGallery dia manana fampiharana mahafinaritra be dia be, lalao manokana amin'ny fotoana sasany, fanomezana indraindray ary safidy anatiny hafa. Misy safidy hafa amin'ny Play Store raha mpampiasa Huawei / Honor ianao, ampiasao ny Aurora Store, io no fivarotana hafa amin'ny fivarotana Google.
Ny fampidinana fampiharana dia tsy misy afa-tsy amin'ny WiFi ao amin'ny AppGalog mila manao izao manaraka izao ianao:
Sokafy ny fivarotana AppGallery amin'ny fitaovanao
Tsindrio ny "I" eo ankavanan'ny farany
Ao anatin'ny «I» no hidirako ny «Safidy» safidy
Ao amin'ilay safidy milaza hoe "Misintoma ireo rindranasa misy angona finday" tsindrio ny "Tsia" mba hisintomana fotsiny amin'ny WiFi
Ity dia hamonjy anao angona be dia be raha toa ka tonga amin'ny fotoana ahafahanao miditra amin'ny fifandraisana WiFi ianao, dia toy izany koa no tadiavinao raha manavao ny rindranasa ianao. Inside Settings izay misy azy hoe "Vaovao farany ny fampiharana" dia zahao hoe "WiFi fotsiny" raha sanatria ka misy fanavaozana ny telefaona amin'ny drafitra angon-drakitrao.
Imbetsaka isika no gaga fa nihoatra ny fetran'ny data momba ny tahanay rehefa misintona fampiharana any ivelan'ny trano, zavatra azontsika ialana. Ny AppGalog dia misy toerana maromaro eo ambanin'ny "Me" ary tsara ny mijery sy manamboatra ny tsirairay amin'ireo safidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ahoana ny fomba fampidinana fampiharana WiFi-irery amin'ny Huawei AppGallery
Tonga tany Eropa ny Realme 7i miaraka amin'ny rafitra Helio G85 sy Android 10
Magic the Gathering Arena tonga haka an'i GWENT, Legends of Runeterra ary Hearthstone